ကျနော်မှာရှိသော ရုပ်ရှင်ကားလေးများ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > .:::ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ:::. > ရုပ်ရှင် နှင့် ရုပ်မြင်ဇာတ်လမ်းတွဲများ > စိတ်ကြိုက် Movie များ > ကျနော်မှာရှိသော ရုပ်ရှင်ကားလေးများ
View Full Version : ကျနော်မှာရှိသော ရုပ်ရှင်ကားလေးများ
ကျနော်မှာရှိတဲ့ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ကြည်ကြည်လင်လင် ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကို ဒီနေရာမှာ ပြန်တင်ပေးချင်ပါတယ်။
ကျနော့်အကြိုက် ကောင်းတာလေးတွေကို ရွေးပြီးဒေါင်းလုပ်ချထားတာပါ။ ၃ ၊ ၄ ခါမက အခါအားလျော်စွာ ပြန်ပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ကားတွေပါ။
ပြန်တင်ပေးမယ့် ရုပ်ရှင်အားလုံးနီးနီးကတော့ AVI format ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ကနေအခဲ့မယ့် ယူနိုင်တဲ့ VLC media player လေး ကြည့်တာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ DVD quality တွေပါ။
VLC media player လေးတွေ ဒေါင်းလုပ်ယူချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်တွေမှာ သွားရောက်အလကားယူနိုင်ကြပါတယ်။
VLC Media Player for Mac အတွက်ဆိုရင်တော့ ... ===&gt; http://download.cnet.com/VLC-Media-Player/3000-2139_4-10210434.html
အရင်ဆုံးအနေနဲ့တော့ Kung Fu Hustle ဆိုတာလေး စတင်ပေးပါ့မယ်။
သိုင်းစာအုပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ... ရှားရှားပါးပါးစာအုပ်ထဲမှာဖတ်တဲ့အရသာအတိုင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းရရှိနိုင်တဲ့ ကွန်ဖူးရုပ်ရှင်ကားလေးပါ။ အဆင့်လွန်သိုင်းကားတကားပေါ့။
ကျနော်ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကို စသိခဲ့ရတာကတော့ ဂျာနယ်တစ်ခုက သတင်းမှာဖတ်ရင်း သိခဲ့ရတာပါ။ ဒီတရုတ်ရုပ်ရှင်ကားလေး ဘယ်လောက်အထိပေါက်ခဲ့သလဲဆိုရင် ... တခြားနိုင်ငံတွေမပြောနဲ့ .. အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတောင် ရုပ်ရှင်ရုံတိုင်း ပွဲတိုင်းရုံပြည့်ရုံလျှံ လက်မှတ်ရောင်းမလောက်အောင် အောင်မြင်နေတဲ့အကြောင်းလေးရေးထားတာပါ။
အဲ့ဒါနဲ့ စိတ်ဝင်စားပြီးရှာဖွေကြည့်မိရာက အင်မတန်ကြိုက်သွားတာပါ။
ဇါတ်လမ်းကိုတော့ မပြောပြတော့ဘူး ... အရသာပျက်သွာမှာဆိုးလို့။ သိုင်းကားပီသစွာ အင်မတန် တင်ပြရိုက်ကူးပုံ ကောင်းတယ်လို့ဘဲပြောပါရစေ ။ ရှေးဟောင်းကားတော့မဟုတ်ဘူး ... သေနတ်တွေ၊ ကားတွေ ပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ခေတ်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ။
AVI format နဲ့ပါ။ 532MB ရှိပါတယ်။ RAR နဲ့ချုံ့ထားပါတယ်။
ပတ်စ်ဝက်ကတော့ အမ် အီး အက်ဖ် ... အင်္ဂလိပ်စာလုံးအကြီး ၃ လုံးကို ဆက်တိုက်ရေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ်ကိုကြီးရေ..ကျွန်တော် zshare နဲ့ဒေါင်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်..အစ်ကိုကြီး ifile နဲ့တင်ပေးလို့ရမလားမသိဘူး..ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
မူရင်းပို့စ်မှာ လင့်ထပ်ဖြည့်ထားပေးပါပြီး ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ ...
ဒါလေးကတော့ ... THE TIME MACHINE ဆိုတဲ့ကားလေးပါ။
ဇါတ်လမ်းလေးက အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို ... ရိုက်ချက်တွေကလဲ အတော်ကောင်းလှပါတယ် ။
AVI format နဲ့ပါ။ ချုံ့ထားတာ 694.3MB ရှိပါတယ်။ RAR နဲ့ချုံ့ထားပါတယ်။
Trailer လေးကြည့်ရအောင် [/color]
ကြွက်နဲ့ကြောင် (Tom &amp; Jerry) ကားတွန်းကားလေးပါ ။
ဟိုးအရင်ကထွက်တဲ့ ကားတော့မဟုတ်ဘူး။ အခု နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ကားထင်တယ်။
AVI format နဲ့ပါ။ ချုံ့ထားတာ 98.24MB ရှိပါတယ်။ RAR နဲ့ချုံ့ထားပါတယ်။
12-23-2009, 09:31 PM
ကျနော် ကိုဖန်ဆင်းရှင် တောင်းဆိုလို့ .. ကျနော်မှာရှိတာလေးကို ကြိုးစားပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
[color=red]AVATAR ရုပ်ရှင်ကားသစ်လေးပါ။ ဇါတ်လမ်းလေးကဆန်းသလို သနားစရာလဲကောင်းပါတယ် .... :4: ။
အရမ်းနဲ့မကြည်သေးပေမယ့် .. CAM version ထက်တော့အများကြီးသာပါတယ်။ အသံထွက်လဲ အတော်လေးကောင်းပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးပါက တပိုင်းချင်းစီကို File Splitter $ Joiner(FFSJ) နဲ့ပြန်ဆက်ပါရန်။
File Splitter $ Joiner(FFSJ) နဲ့ပြန်ဆက်တဲ့နည်းကိုတော့ Software ဖြင့် ဖိုင်များခွဲခြင်း (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3311.msg42228.html#msg42228).... မှာ ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။
ပြန်ဆက်ရင်တော့ ပတ်စ်ဝက်လေး ထည့်ပြီးပြန်ဆက်လိုက်နော်။
ဒေါင်းလုပ်လင့် ထပ်ဖြည့်ခြင်း ....
Avatar (2009) BRRip 1.2GB
အပိုင်း(၁) (http://mediafiremoviez.com/avrbrif1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://mediafiremoviez.com/avrbrif2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://mediafiremoviez.com/avrbrif3) ၊ အပိုင်း(၄) (http://mediafiremoviez.com/avrbrif4) ၊ အပိုင်း(၅) (http://mediafiremoviez.com/avrbrif5) ၊ အပိုင်း(၆) (http://mediafiremoviez.com/avrbrif6) ။
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/avrdvdmf1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/avrdvdmf2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/avrdvdmf3) ၊ အပိုင်း(၄) (http://bit.ly/avrdvdmf4) ။
ပတ်စ်ဝက် .... mediafiremoviez.com
ကျွန်တော် youtube မှာ world trade center နဲ့ပက်သက်ပြီး လိုက်ရှာရင်တွေ့တဲ့ အကောင်းဆုံး video ဖိုင် ၃ ခုပါ ။
ကျွန်တော်သိမ်ထားတဲ့ အမှတ်တရလေးမို့ မျှဝေခံစားချင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Filesize - 46 MB
2012 ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ရှိရင်
01-03-2010, 12:44 PM
The planets in the Solar System on the winter solstice (December 21) of 2012 has distorted the Earth from its axis of rotation. This led to the end of the world of the world and mankind must struggle to survive. The film inspired from the theory that the ancient Maya predicted end of the world happens toapoint on the winter solstice in 2012. Basis for the foundation of this hypothesis based on cycles of the Mesoamerican Long Count calendar, on December 21, 2012.
2012 (2009) BRRip 700mb
ဒေါင်းလုပ်လင့် ထပ်ဖြည့်ထားပါသည် ။ chit tee
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?jimjiqmtaut) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?jhnytnmtmcj) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?gnkjhmnldvm) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?vyz0zqtzjz5) ။
ပတ်စ်ဝက်တောင်းပါက - mediafiremoviez.com ထည့်ပါ ။
ကို phoeko ရေ..
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ..
ကျွန်တော် ဒီကားကို ကြည့်ချင်နေတာ ကြာပါပြီ..
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် download ကို mediafire နဲ့အားလုံး ဆွဲပြီးသွားပါပြီ..
play တော့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်..တစ်ချို့ကျတော့ အစလေးပဲပါတယ်..
GOM,VLC,PowerDVD,Window Media Player တွေကိုတော့သုံးပြီးပါပြီ..
အဲဒါ ဘယ် player နဲ့ အဆင်ပြေမလဲလို့ပါ..
နောက်ပြီး အပိုင်း(၁၀) ပိုင်းလား ဒါမှမဟုတ် ထပ်နေတာလားတော့မသိဘူး..
အပိုင်းတွေ ထပ်နေသလိုပဲ..ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်စစ်ပေးပါလားခင်ဗျာ..
လိုင်းကတော့ download ဆွဲတာ ခဏလေးပဲဗျ..လိုင်းကောင်းတာသေချာပါတယ်..
အော် ကျွန်တော် ifile နဲ့လည်း ဆွဲပြီးသွားပြီ..ခုနလိုပဲ အစလေးတွေပဲ ပါတယ်..
HJ-Split နဲ့ ပြန်ဆက်ရမယ်ထင်တယ်။
ဒီနေရာကပို့စ်လေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3311.msg42228.html#msg42228)လုပ်ပုံလုပ်နည်းလမ်းစလေးတွေရှိတယ် ....
မရရင်လဲ ထပ်ပြောအုံးပေါ့ ...
[color=red]AVATAR ရုပ်ရှင်လေးကို မူရင်းနေရာမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg41117.html#msg41117) လင့်တွေအကုန် ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ်။
အပိုင်းပိုင်းတွေကို ပထမဦးဆုံးဖိုင်ဖြစ်တဲ့ အပိုင်း(a) ကနေ စပြီးပြန်ဆက်လိုက်နော် ။
ဆက်ပုံဆက်နည်းနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ယူဖို့နေရာတွေပါ တပါတည်းပြပေးထားပါတယ်။
နောက်ပြီး Trailer လေးတွေပါ အမြည်းကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ :7:
ရုပ်ရှင်ကားလေး နာမည်ကတော့ &quot;9&quot; ဖြစ်ပါတယ်။
2009 မှာရုံတင်တာပါ။ သနားစရာလဲကောင်းတယ်။ ကြည့်လို့လဲကောင်းတယ်။ မကြည့်ရသေးရင်ကြည့်လိုက်နော် ။
ရုပ်ထွက်အင်မတန်ကြည်လင်သလို အသံထွက်လဲ အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
Tralier မှာ အရင်မြည်းကြည့်ပေါ့။
ဒီကားလေးကလဲ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကားလေးတကားပါဘဲ ။
ကြည့်ဖူးကြရင် လဲ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ မကြည့်ဖူးရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ ။
ကားနာမည်ကတော့ Wall-E ပါ ။ ကျနော်စကြည့်တုန်းက ဇါတ်လမ်းအစမှာ ဘာမှမဟုတ်သလိုနဲ့ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ အင်မတန်ကြိုက်သွားတယ်။ လူတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတာမဟုတ်ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ တခုခုကျန်ခဲ့စေအောင် တင်ပြပုံလေးလဲကောင်းပါတယ်။ ရုပ်ထွက်ကြည်လင်သလို အသံထွက်လဲ အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
နမူနာ Trailer လေးလဲအရင်ကြည့်နော် ။
ယခုတခါ တင်ဆက်မယ့်ဇါတ်လမ်း လေးကတော့ Resident Evil 1 ပါ ။ စကြည့်ကတည်းက အရမ်းကို ကြိုက်တာပါ (Resident Evil 1,2,3,4 အကုန်ကြိုက်ပါတယ်) ။ ဒီကားလေးက ရုပ်ထွက်ကြည်လင်သလို အသံထွက်လဲ အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
ဂျက်လီ ရဲ့ Fist of Legend ဇါတ်ကားလေးပါ ။ ဘရုစ္စလီလဲ ဒီကားလေးရဲ့ ကျောရိုးအတိုင်းရိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဂျပန်တွေ အုပ်စိုးစဉ်အချိန်အခါက ဆရာအတွက် ဂလဲ့စားချေ မယ့်တရုတ်မျိုးချစ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဂျက်လီရဲ့ အင်မတန်ပြတ်သားတဲ့ တုန့်ပြန်မှုဖိုက်တင်လေးတွေကိုကြည့်ရမှာပါ ။ ရုပ်ထွက်ကြည်လင်သလို အသံထွက်လဲ အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
ဂျက်လီ နဲ့ ဂျက်ကီချန်း တို့ရဲ့ မတွဲစဖူးတွဲရိုက်ထားတဲ့ The Forbidden Kingdom ဇါတ်ကားလေးပါ ။ ဂန္ဓ၀င် ဖိုက်တင်မင်းသား ၂ ယောက်ပါဝင်တဲ့ ပထမဦးဆုံးကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
အင်မတန်မှကို ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
Bee ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
(နမူနာတွေအားလုံးက Youtube လေးနဲ့ပါ မြန်မာပြည်မှာကကြည့်လို့ရရဲ့လားမသိဘူး)
ကို chit_tee ရေ..
youtube က တစ်ချို့ Trailer တွေဆိုရင် ပေါ်ပါတယ်...
ကျန်တာတွေတော့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ မပေါ်ဘူးဗျ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဇာတ်ကားကြည့်ရတော့ အဆင်ပြေပါတယ်..
စကားမစပ်---အင်ဒီယာနာဂျုံး ရဲ့ ကားလေးတွေ ရှိရင်လည်း တင်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ
အေးဗျာ ... ဘာဖြစ်လို့ Youtube နမူနာတွေ အားလုံး ကိုကြည့်လို့မရတာလဲမသိဘူး။
ကြည့်လို့ရရင်တော့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဟုတ်မဟုတ်... အရင် မြည်းပြီးမှ ဒေါင်းလို့ရတာပေါ့ဗျာ။
တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းမတူနိုင်ကြလို့ ကျနော့်အကြိုက်တွေက တခြားသူအတွက်ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မှာပေါ့။
ဒါကြောင့် နမူနာလေးတွေ ရှာပြီးတွဲပေးထားတာပါ။
ဇာတ်လမ်းလေးတွေကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ အင်ဒီယာနာဂျုံး နောက်ဆုံးကားလေးတော့ ရှိတယ်။ ညကျရင် တင်ပေးပါ့မယ်။
Mulan (Hoa Mộc Lan) 2009 DVDRip
အကို chit tee ကို အားဖြည့်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ ဇတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ။
ဂျက်ကီချန်း ရဲ့ အဆင့်မြင့်ကားလေးတကားဖြစ်တဲ့New Police Storey ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။ရဲရင့်တဲ့ ရဲအရာရှိတယောက်ကို နောက်ကောက်ချလိုက်တဲ့ လူငယ်တသိုက် ။ လူငယ်တွေရဲ့ ခံစားမှုကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့ ရဲမှူးကြီးနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဇါတ်လမ်းဇါတ်ကွက်များစွာနဲ့ ... အဆင့်မြင့်ကားလေးတကားပါ။ မကြည့်ရသေးရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြနော်။
နမူနာထွေလာာလေးကြည့်လိုက်အုံးနော် (Youtube နဲ့ပါ)
The Kingdom of Crystal Skull (Indiana Jones 4) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
Indiana Jones ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ ။ မကြည့်ရသေးရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြနော်။
ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
ကျနော် www.4shared.com မှာတင်ထားသောရုပ်ရှင်များကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချလိုပါက ....
4 shared Desktop Upload and Download Manager (http://www.4shared.com/file/EU_wsC5a/4shared_Desktop_320.html) လေးကို အင်စတောလုပ်ပြီး ချကြည့်ပါ။
အနည်းဆုံး 60 KB/sec ကနေ 240/250 KB/sec လောက် speed နဲ့ကျလာပါလိမ့်မယ်။ အများအားဖြင့်တော့ average 150 KB/sec လောက်နဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။
တခြား side effect တွေတော့မသိဘူး :7: ။
free ware လေးပါ။
New Version ဖြစ်တဲ့ ..... 4shared Desktop 3.2 လင့်ပြန်ပြင်ပေးထားပြီးပါပြီ ။
14.4.2010 ; 8:47 pm (Singapore time)
Journey to the Center of the Earth ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
စွန့်စားခန်းတွေ ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ ။ မကြည့်ရသေးရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြနော်။ မင်းသားနာမည်တော့မသိဘူး Mummy ဇါတ်ကားတွေရိုက်တဲ့ မင်းသားပါ။
4shared မှာတင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချချင်ရင်တော့ ဒီနေရာလေး (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg42877.html#msg42877)မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
Indiana Jones ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ ။ မကြည့်ရသေးရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြနော်။
အစ်ကိုတို့ရေ ဒါလေးကိုလင့်ချိန်းပြီး တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ..ကျွန်တော် 4share ၀င်မရလို့ပါခင်ဗျာ..ဘန်းကျော်နဲ့ကျတော့ ဒေါင်းမရပြန်လို့ပါ..Rapidshare လေးနဲ့ပြန်တင်ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင် ကူညီကြပါဦးဗျာ..ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဇါတ်ကားလေးမို့လို့ပါ.. ဒီကားလေးတင်ပေးတဲ့အတွက် ကိုချစ်တီး ကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
Brother Chit Tee
I think for kindly supporting Movies .
Since boy life, i am crazy of Jones.
If u have more movies of Jones and free time, Pls share me.
thank u more than i say
မူရင်းပိုစ့်မှာ rapidshare လင့် ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါပြီနော်။
Home Alone2ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။ ဟာသကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ ။
Indiana Jones and the Last Crusade ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
Indiana Jones ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ ။ မကြည့်ရသေးကြရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ကြပါ။
ကို thetwinoo ရေ ... ရှာလို့ရတာလေး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Catwoman ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ခလေးကြိုက်လေးလို့တော့ မပြောကြနဲ့နော် ... ကြည့်လို့ကောင်းတယ် ။
Mission Impossible II (M:i:II) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
မင်းသား တွန်ခရုခ် ရဲ့ Non-Stop Action ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးပါ။
ရုပ်ရှင် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် ....
အပိုင်း(၁) (http://dc179.4shared.com/download/199889612/1bfa4052/mi2adfaeavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc143.4shared.com/download/199889615/859ed5f1/mi2adfaeavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc179.4shared.com/download/199889616/1c97844b/mi2adfaeavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc124.4shared.com/download/199889617/6b90b4dd/mi2adfaeavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc126.4shared.com/download/199889623/47d02307/mi2adfaeavi.__e) ၊ အပိုင်း(၆) (http://dc149.4shared.com/download/199889632/29cc22d0/mi2adfaeavi.__f)။
Jurassic Park III ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://dc183.4shared.com/download/204165073/abd6bdcf/yxmuqxsjhhacavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc171.4shared.com/download/204165070/32dfec75/yxmuqxsjhhacavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc165.4shared.com/download/204165066/c2a77801/yxmuqxsjhhacavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc171.4shared.com/download/204165075/42b518fa/yxmuqxsjhhacavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc183.4shared.com/download/204165074/35b2286c/yxmuqxsjhhacavi.__e) ။
Alien vs. Predator (2004) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
သဲတထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc124.4shared.com/download/211906319/f02bba14/hkblsrpsskumavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc185.4shared.com/download/211906318/872c8a82/hkblsrpsskumavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc160.4shared.com/download/211906323/3bd300c9/hkblsrpsskumavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc200.4shared.com/download/211906320/a2da5173/hkblsrpsskumavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc198.4shared.com/download/211906327/3cbec4d0/hkblsrpsskumavi.__e) ။
Kung Fu Chefs (2009) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ကြော်ငြာတာတွေ့ပြီး ဒီကားလေးကို ကြည့်ချင်နေတာတော့ကြာပါပြီ။ မနေ့ကမှရလို့ပါ။ ကြည့်တောင်မကြည့်ရသေးပါဘူး ၊ ရရချင်းဘဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖက်တီးမင်းသား ဟုတ်ကျင်ပေါင် (SAMMO HUNG) ပါဝင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးပါ။ အချက်အပြုတ်တွေကို အခြေခံထားတဲ့ ခေတ်ပေါ် Kung Fu ကားလေးတကားပါ။ ဖျော်ဖြေမှုတစ်တော့ ကောင်းကောင်း ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။
ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းပါတယ်။
အပိုင်း(၁) (http://dc190.4shared.com/download/215686249/b9f7f961/KFC_shanmkv.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc191.4shared.com/download/215686252/373e11a8/KFC_shanmkv.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc151.4shared.com/download/215686253/4039213e/KFC_shanmkv.__c) ။
X-Men 3: The Last Stand (2006) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးပါ။ ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc176.4shared.com/download/216596410/33cd88b1/X-man_3avi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc189.4shared.com/download/216596413/aac4d90b/X-man_3avi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc179.4shared.com/download/216596419/4a113015/X-man_3avi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc130.4shared.com/download/216596417/ada91d12/X-man_3avi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc180.4shared.com/download/216596418/3d160083/X-man_3avi.__e) ။
02-07-2010, 03:39 PM
HULK2(The Incredible) (2008) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်တစ်ကားလေးပါ။ ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc160.4shared.com/download/216700058/3bc0f1fd/Hulx_IIavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc189.4shared.com/download/216700062/f0384b20/Hulx_IIavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc145.4shared.com/download/216700067/8052bfaf/Hulx_IIavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc193.4shared.com/download/216700065/6e5cde83/Hulx_IIavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc189.4shared.com/download/216700061/69311a9a/Hulx_IIavi.__e) ။
Bangkok Dangerous ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
Nicolas Cage ရဲ့ Action ရုပ်ရှင်ဇာတ်တစ်ကားလေးပါ။ ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းပါတယ်။ AVI format ပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc204.4shared.com/download/216781601/b32aed0a/bankok_nightavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc200.4shared.com/download/216781602/2a23bcb0/bankok_nightavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc191.4shared.com/download/216781607/5a49483f/bankok_nightavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc191.4shared.com/download/216781604/c3401985/bankok_nightavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc200.4shared.com/download/216781609/bdf16538/bankok_nightavi.__e) ။
02-08-2010, 08:01 PM
Balls of Fury (2007) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ပင်ပေါင်အားကစားကို အခြေခံပြီး ဟာသဆန်ဆန်ရိုက်ထားတဲ့ Action ရုပ်ရှင်ဇာတ်တစ်ကားလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc190.4shared.com/download/216900946/f0b8b744/ball_of_furyavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc197.4shared.com/download/216900953/99c9728a/ball_of_furyavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc203.4shared.com/download/216900957/9ea4b693/ball_of_furyavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc181.4shared.com/download/216900959/791c9b94/ball_of_furyavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc202.4shared.com/download/216900961/5cea4065/ball_of_furyavi.__e) ။
The Incredibles (2004) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
Super Hero Family Action animation ရုပ်ရှင်ဇာတ်တစ်ကားလေးပါ။ ခလေးကြိုက်လေးပေမယ့် ကျနော်လဲ အတော်ကြိုက်တယ်။
အပိုင်း(၁) (http://dc189.4shared.com/download/218345421/3a418fb/The_Incrediblesavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc189.4shared.com/download/218345423/edaa79d7/The_Incrediblesavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc198.4shared.com/download/218345460/10cfed69/The_Incrediblesavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc180.4shared.com/download/218345418/5155f39c/The_Incrediblesavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc200.4shared.com/download/218345424/73ceec74/The_Incrediblesavi.__e) ၊အပိုင်း(၆) (http://dc191.4shared.com/download/218347888/2384793a/The_Incrediblesavi.__f)။
True Lies (1994) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
အာနိုး ရဲ့ Full Action ရုပ်ရှင်ဇာတ်တစ်ကားလေးပါ။ မိသားစုနဲ့ အထူးထောက်လှမ်းရေးဝန်ထမ်းအလုပ်ကြားမှာ ဗျာများရင်းနဲ့ မိသားစုကလဲ နားမလည်နိုင် ဘဲပြိုကွဲခါနီးအထိဖြစ်ပြီးခါမှာ အာနိုးရဲ့စွန်းစားခန်းတွေကြောင့် ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားတဲ့ အဖျက်သမားသမားတွေကို နှိမ်နင်းတဲ့ အကြောင်းရိုက်ထားတာလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc202.4shared.com/download/221168935/cb7f1676/tlriueeavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc198.4shared.com/download/221045188/1bdfbaa0/tlriueeavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc198.4shared.com/download/221045187/8b60a731/tlriueeavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc207.4shared.com/download/221045190/c1f03d3/tlriueeavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc203.4shared.com/download/221045191/7b183345/tlriueeavi.__e) ၊ အပိုင်း(၆) (http://dc198.4shared.com/download/221045192/e21162ff/tlriueeavi.__f) ၊ အပိုင်း(၇) (http://dc195.4shared.com/download/221045195/7c75f75c/tlriueeavi.__g)။
Ip Man (2008) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
မင်းသားနာမည်တော့ ကျနော်မသိဘူး။ ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ ဒီမင်းသားငယ်စဉ်တုန်းကတော့ Break dance kung fu မင်းသားဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့အရပ်မှာခေါ်လေ့ရှိတဲ့မင်းသားပါ။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇါတ်ကားလေးလို့တော့ပြောကြပါတယ်။ ဇါတ်လမ်းလေးနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ kung fu ရုပ်ရှင်ဇာတ်တစ်ကားလေးပါ။
ဒီကားလေးထဲက မင်းသားကတော့ တကယ့်အပြင်လောကမှာ တချိန်က kung fu ကားတွေမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဘရုစ္စလီရဲ့ ဆရာရဲ့ ဇါတ်ကြောင်းလေးကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc193.4shared.com/download/225152203/d936b1c6/ipmanavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc167.4shared.com/download/225152196/7ad84059/ipmanavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc213.4shared.com/download/225152199/ea675dc8/ipmanavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc197.4shared.com/download/225152188/847b5c1f/ipmanavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc205.4shared.com/download/225152191/e4bcd5fa/ipmanavi.__e) ၊အပိုင်း(၆) (http://dc169.4shared.com/download/225152264/110883e3/ipmanavi.__f) ၊အပိုင်း(၇) (http://dc203.4shared.com/download/225152194/94d62175/ipmanavi.__g)။
ရုပ်ရှင်ထဲက ip man နဲ့ အပြင်က ip man
ဘရုစ္စလီနဲ့သူ့၏ဆရာ (ip man)
Ip man ရဲ့ တပည့်ကျော် ဘရုစ္စလီ (Bruce Lee)
i, Robot ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ကျနော့်ကြိုက်တဲ့ အက်ရှင်ကားလေးတကားပါ။ ရုပ်ထွက် အသံထွက် အကြည် AVI format ပါလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc199.4shared.com/download/238743986/9328ec36/i-robotavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc192.4shared.com/download/238743990/63507842/i-robotavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc173.4shared.com/download/238743992/8d5e196e/i-robotavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc191.4shared.com/download/238743991/145748d4/i-robotavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc169.4shared.com/download/238743985/a21bd8c/i-robotavi.__e) ။
The Mummy3: Tomb of the Dragon Emperor ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
သဲထိတ်ရင်ဖို အက်ရှင်ကားလေးတကားပါ။ နာမည်ကြီးတရုတ်မင်းသား ဂျက်လီက လူဆိုးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ။ ရုပ်ထွက် အသံထွက် အကြည် AVI format ပါလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc146.4shared.com/download/228784548/45b2a27f/ricwqsnruqvkavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc199.4shared.com/download/228784543/d2607bf7/ricwqsnruqvkavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc203.4shared.com/download/228784541/3c6e1adb/ricwqsnruqvkavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc173.4shared.com/download/228784544/4c04ee54/ricwqsnruqvkavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc213.4shared.com/download/228784539/7df4042e/ricwqsnruqvkavi.__e) ။
Collateral Damage ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
အာနိုး ရဲ့ Full Action ရုပ်ရှင်ဇာတ်တစ်ကားလေးပါ။ အသေခံ အကြမ်းဖက်ဖောက်ကွဲသမားများကြောင့် မိန်းမ နဲ့ ခလေး စတေးခံလိုက်ရလို့ ကျားနာတကောင်လို နာကျည်းစွာဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားများကို လိုက်လံ ချေမှုန်းတဲ့ ဇါတ်ကြမ်းလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc204.4shared.com/download/241531134/5a7dfc33/CollateralDamageavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc181.4shared.com/download/241531135/2d7acca5/CollateralDamageavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc149.4shared.com/download/241531137/c374ad89/CollateralDamageavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc185.4shared.com/download/241531140/1251aeed/CollateralDamageavi.__d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc180.4shared.com/download/241531139/24cc808e/CollateralDamageavi.__e) ၊ အပိုင်း(၆) (http://dc160.4shared.com/download/241531143/8b58ff57/CollateralDamageavi.__f) ။
Hot Shots ! ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ဟာသကားလေးပေါ့ .. ။ ရမ်ဘို-2 ရုပ်ရှင်ကားကို အပြောင်အပျက် ပြန်ရိုက်ထားတာ ။
အပိုင်း(၁) (http://dc182.4shared.com/download/244686658/3e7555ba/shotdnjfbvlqnkhlhotavi.__a)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc197.4shared.com/download/244686637/f890efad/shotdnjfbvlqnkhlhotavi.__b) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc200.4shared.com/download/244793198/566d0614/shotdnjfbvlqnkhlhotavi.__c) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc192.4shared.com/download/244686659/4972652c/shotdnjfbvlqnkhlhotavi.__d) ။
ရယ်ရတယ်နော် ... နမူနာလေးကြည့်ကြည့်ရင် ကြိုက်သွားမယ် ....
Ip Man (2008) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။[color=blue]
4shared က ပတ်ဝက်တောင်းနေတယ်ခင်ဗျ ဘာပေးရမလဲမသိဘူး plz
ပတ်စ်ဝက်က ပို့စ်ထဲမှာ ပေးထားပြီးသားပါ ။ သေချာဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ ။
ပတ်စ်ဝက်ကတော့ [color=blue]အမ် အီး အက်ဖ် ... အင်္ဂလိပ်စာလုံးအကြီး ၃ လုံးကို ဆက်တိုက်ရေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ .... လို့ရေးထားပါတယ် ။
MEF ဆိုတာလေး ထည့်ပေးရမှာပါ။
ပတ်စ်ဝက်ကတော့ အမ် အီး အက်ဖ် ... အင်္ဂလိပ်စာလုံးအကြီး ၃ လုံးကို ဆက်တိုက်ရေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ .... လို့ရေးထားပါတယ် ။
ကျနော်က ဖိုးရှဲဆိုက်မှာတောင်းတာကို ပြောတာပါ file join လုပ်တဲ့နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး အမ်အီးအက်ဖ် အကြီးစလုံးရိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ ပထမအပိုင်းတွေရပါတယ်ခင်ဗျ နောက်ပိုင်းကျ အဲလိုပေါ်လာတာကိုပြောတာပါခင်ဗျ ဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ....
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ .... ကျနော်ပြောတာကလဲ ... ပတ်စ်ဝက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်နေရမှာဘဲတောင်းတောင်း MEF ဆိုတာလေးကို ထည့်သာပေးလိုက်ပါ။
အဆင်မပြေရင်တော့ ပြန်ပြောပါ ။ ကျနော်စမ်းကြည့်တာတော့ MEF လေးထည့်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ် ။
ပိုကျိန်းသေအောင်လို့ MEF လေးကို copy &amp; paste လေးလုပ်ပြီး ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပါအုံးဗျာ ...... :7:
ကို chit tee ပြောသလို MEF ကို 4shared မှာရိုက်ထည့်ပြီး
ရှေ့ကဇာတ်ကားတွေကိုတော့ အဲဒီလိုလုပ်ပြီး ကြည့်ခဲ့တာ အဆင်ပြေပါတယ်..
ကို chit tee ကလည်း ပြန်စစ်ပြီးပြီဆိုတော့လေ...
ဒီနေ့ ဒေါင်းပြီးသွားပါပြီ သေချာတာတော့ ကျနော် ပတ်ဝက် ကိုအမုန်ရိုက်ပေးတာပါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိပါတယ် အကုန်ချက်လုပ်ကြည့်ခဲ့တာပါ ဘယ်လိုကြောင့်လဲတောမသိဘူး ဒီနေ့မှ နောက်ဆုံပိုင်းရသွားတာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါလေးကတော့ ... [color=red]THE TIME MACHINE ဆိုတဲ့ကားလေးပါ။
အစ်ကိုရေ.. part5က file expire ဖြစ်နေတယ်တဲ့. ifile ကနေ ဆွဲတာပါ..
ကို phyo ရေ ...
ကျနော် 4shared ကနေ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
အရင်တုန်းက zshare နဲ့ ကျနော်တင်ပေးထားတာထင်ပါတယ် (သူလဲ file expire ဖြစ်နေပြီ) ။
ifile နဲ့ကတော့ ညီလေးရာမည ထပ်ဖြည့်တင်ပေးသွားတာလားမသိဘူး ။
The Evil Cult ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
မြ၀တီကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့စဉ်က လူကြိုက်များခဲ့သလို ၊ သိုင်းဝတ္ထုမှာလဲ အင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ နဂါးနိုင်ဓါး ဆိုတာလေးကို အကျဉ်းချုပ် အနေနဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသား ဂျက်လီက ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ ။ ကျန်းဝူကျိအဖြစ် ဂျက်လီ ၊ ကျန်းဆန်းဖုန်းအဖြစ် သိုင်းမင်းသား ဟုန်ကျင်ပေါင် (ဖက်တီး) ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ။ ရုပ်ထွက် အသံထွက် ကတော့ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ် ။ ဟိုးအရင်တုန်းက ကားဖြစ်လို့ DVD quality မဟုတ်ပေမယ့် အဆင်ပြေပါတယ် ။ AVI format ပါလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc177.4shared.com/download/245413720/af5c1984)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc199.4shared.com/download/245413746/10651b37) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc150.4shared.com/download/245413740/f906be02) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc180.4shared.com/download/245413729/d680a120) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc204.4shared.com/download/245821544/6784dc55) ။
မူရင်းလင့်ဖြစ်တဲ့ ... ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg40778.html#msg40778) 4shared လင့်လေးတွေနဲ့ ပြန်လည်တင်ပေးထားပါတယ် ။
update link လေးရှိရင်တင်ပေးပါလား...
03-27-2010, 09:19 AM
မူရင်းပိုစ့်မှာ လင့် ပြန်ပြင်ပေးထားပါပြီနော်။
Tomb Rider (2001) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
Tomb Rider ရုပ်ရှင်ကားလေးက ဂိမ်းမှာ နာမည်ကြီးပြီးမှ ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်တာထင်တယ် (မှားချင်လဲမှားမယ်နော်)။
ကြည့်လို့တော့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ် ။ ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ ထုသားပေသားကျတဲ့ အမျိုးသမီး လူစွမ်းကောင်းမလေးရဲ့ အက်ရှင်ကားလေးပါ။
ဂိမ်းထဲမှာတော့ ... ဒီလိုလေး ...
အပိုင်း(၁) (http://dc222.4shared.com/download/249854744/265e4e6d)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc226.4shared.com/download/249854754/3f457f2c) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc160.4shared.com/download/249854750/3828bb35) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc183.4shared.com/download/249854746/c8502f41) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc222.4shared.com/download/249854749/58ef32d0) ၊ အပိုင်း(၆) (http://dc191.4shared.com/download/249854753/a121ea8f) ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/file/on94iljgy7t/L.Ct.T.R.2001.720p_300mbfilms.com.mkv.001) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/file/tzcxxgq1wxs/L.Ct.T.R.2001.720p_300mbfilms.com.mkv.002) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/file/1g3n4xbtxym/L.Ct.T.R.2001.720p_300mbfilms.com.mkv.003) ။
ပတ်စ်ဝက် - 300mbfilms.com
Spiderman I ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ထွေထွေထူးထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာတော့ လိုမယ်မထင်ပါဗျာ ။ Spiderman ဆိုမှတော့ အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း ကြည့်
ကောင်းတဲ့ ကားလေးတကားပါဘဲ ။ ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းတဲ့ AVI format ပါလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc217.4shared.com/download/250059522/dde8874d)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc206.4shared.com/download/250059528/3d3d6e53) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc195.4shared.com/download/250059526/da854354) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc223.4shared.com/download/250059532/c4f3b60c) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc223.4shared.com/download/250059532/c4f3b60c) ။
Spiderman II ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
Spiderman ဆိုမှတော့ အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကားလေးတကားပါဘဲ ။ ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းတဲ့ AVI format ပါလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc222.4shared.com/download/250238314/611f3ec7)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc185.4shared.com/download/250238578/3a7ea9d8) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc178.4shared.com/download/250059518/16103d90) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc218.4shared.com/download/250525960/f6ab281a) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc180.4shared.com/download/250059525/438c12ee) ။
Spiderman III ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကားလေးတကားပါဘဲ ။ ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော ကောင်းတဲ့ AVI format ပါလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc203.4shared.com/download/251676986/7bfdf925)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc141.4shared.com/download/251676993/128c3ceb) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc151.4shared.com/download/251676999/f259d5f5) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc229.4shared.com/download/251677007/734e1f51) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc182.4shared.com/download/251929786/10b6f9dc) ။
G.I. Joe: The Rise of Cobra ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://dc220.4shared.com/download/251677003/7423db48)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc201.4shared.com/download/251676995/fbef99de) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc222.4shared.com/download/251781189/318ac9c1) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc182.4shared.com/download/251770051/b1d1a53d) ၊ အပိုင်း(၅) (http://dc199.4shared.com/download/251676990/8b856d51) ။
youtube လေးကကြည့်လို့မရပါက ... သူ့ကို double click လေးနှိပ်ပြီး သူ့ရဲ့မူရင်ဆိုက်မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ် ။
How to Train Your Dragon (2010) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကားလေးတကားပါဘဲ ။ ရုပ်ထွက်ရော အသံထွက်ရော အရမ်းမကြည်ပေမယ့် လက်ခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ AVI format ပါလေးပါ။
အပိုင်း(၁) (http://dc203.4shared.com/download/258179707/1e430b8c)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc213.4shared.com/download/258179710/993caf6e) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc191.4shared.com/download/258179714/9e516b77) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc136.4shared.com/download/258934545/7c1c87ba) ။
Monsters vs Aliens (2009) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပနေရင်းနဲ့ အရမ်းကာရော ... အဆောက်အဦးနဲ့မဆန့််လောက်အောင် ကြီးထွားသွားခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး တယောက်အကြောင်းပါ .....
ဒီကားထဲက အကြိုက်ဆုံးအခန်းကတော့ ဂြိုဟ်ကရောက်လာတဲ့ ဘာနဲ့ပစ်ပစ် မဖြုံတဲ့အကောင်းကြီးကို Mr.President (အမေရိကန် သမ္မတကြီး) ကနှုတ်ဆက် ကြိုဆိုတဲ့အခန်းလေးပါဘဲ ။
အပိုင်း(၁) (http://dc168.4shared.com/download/240079214/ac8334c0)၊ အပိုင်း(၂) (http://dc172.4shared.com/download/240079213/32e7a163) ၊ အပိုင်း(၃) (http://dc182.4shared.com/download/240079217/358a657a) ၊ အပိုင်း(၄) (http://dc185.4shared.com/download/240079248/d8428cae) ။
Mr.President ကြိုဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းလေး ...
4 shared Desktop Upload and Download Manager (http://dc182.4shared.com/download/194852257/46b3fb75/4shared_Desktop_310.exe) လေးကို အင်စတောလုပ်ပြီး ချကြည့်ပါ။
I can&#039;t download more than 5MB. What&#039;s wrong?
kosithuag ရေ ....
ကျနော် ပြန်စမ်းကြည့်တော့လဲ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ် ။ အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ မသိလို့ရှာဖွေနေတာ မသိသေးလို့ ချက်ခြင်း စာမပြန်ဖြစ်တာပါ ။
တကယ်အမြဲ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့ အကောင့်ဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေဘဲ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ရတော့မလိုဖြစ်နေတာပေါ့ ။
အခုလေးတင် ... စမ်းကြည့်တာရလို့ စာပြန်လိုက်ပါတယ် ။
အရင် ကျနော်တင်ပေးထားတာက 4shared desktop Version 3.1 ပါ ။
အခု ထပ်ထွက်နေတဲ့ 4shared desktop Version 3.2 နဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချရင်တော့ တဖိုင်ကို .... 5GB အထိ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပါတယ် ။
မူရင်းလင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေရာမှာလေးက (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg42877.html#msg42877) လင့်မှာ ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ် ။ သွားယူလိုက်နော် ။
Version အသစ်လေးကို အင်စတောလုပ်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်နော် ... ။ ကျနော်စမ်းကြည့်တာတော့ ရတယ်။
အောက်ကပုံလေးမှာ ကြည့်ကြည့်နော် ..... ဒေါင်းလုပ် speed တောင် ပိုမြန်လာသလိုဘဲ .... :haha:
အပေါ်က အစ်ကိုပြောတဲ့ 4shareDownloader နဲ့အဆင်မပြေရင်
Internet Download Manager နဲ့ဒေါင်းကြည့်ပါလား အစ်ကိုရ ..ကျွန်တော်ကတော့ IDM options=&gt;File types အောက်က Box လေးမှာ _* ဆိုပြီးပေးထားလိုက်တာပဲ MEF ဆိုတဲ့ စကားဝှက်ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ IDM နဲ့ ကျလာတာပဲလေ..Download Speed လည်းကောင်းနေတာပဲ.ဘယ်ဖိုင်ကိုချချင်သလဲအရင်ကြည့်ပြီး အဲ့ဒီဖိုင်ရဲ့ File Type အစတစ်လုံးကိုယူ သူ့နောက်မှာ (*) လေးခံထည့်ပေးလိုက်ရင် IDM ကဒေါင်းသွားပါလိမ့်မယ်..ဥပမာ.. Video.avi ကိုချမယ်ဆိုရင် A* ဆိုတာလေး ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ(မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်က ကိုမျိုးမင်းဇော် ပြောပြတဲ့ နည်းလေးပါ)..ကျနော် ဇာတ်ကားများတောင်းဆိုရန်မှာ တာဇံကားလေး တောင်းထားတာလည်း မြန်မာမိသားစုမှာ ရှာတွေ့လို့ အဆင်ပြေသွားပါပြီဗျာ.ကျွန်တော့်အတွက် အစ်ကိုအစ်မတွေ ခေါင်းခဲနေမှာဆိုးလို့ အသိပေးလိုက်တာပါ
Little BIG SOLDIER (2010) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
မင်းသားကတော့ ဂျက်ကီချန်းပါ ။
ရှေးခေတ် တနယ်နဲ့တနယ် စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာ ဥာဏ်များတဲ့ စစ်သားငယ်လေးတယောက်ကနေ ရန်သူ့ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ယူခဲ့ဖို့ ကြိုးစားရာကနေ .... တဖြည်းဖြည်း .... ရန်ဘက်က နေ မိတ်ဘက်ဖြစ်သွားပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ..... မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သွားသည်ကို ပိတ်ကားပေါ်မှာ ရှုစားတော်မူပါ ....
ဂျက်ကီးချန်းရဲ့ကားဖြစ်နေလို့ ထုံးစံအတိုင်း ဟာသလေးတွေနဲ့ ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာလေး သတင်းကောင်းပေးပါရစေ .....
အပိုင်း(၁) (http://www.4shared.com/file/14NQnsUF/Little_tmoeBig_kswqwrflSoldier.html)၊ အပိုင်း(၂) (http://www.4shared.com/file/tD_XgeW9/Little_tmoeBig_kswqwrflSoldier.html) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.4shared.com/file/qyAG1URP/Little_tmoeBig_kswqwrflSoldier.html) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.4shared.com/file/4syq02wP/Little_tmoeBig_kswqwrflSoldier.html) ။
14 BLADES (2010) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.4shared.com/file/V9q9E8Xd/14Bladesgfpfnkkqabccavi.html)၊ အပိုင်း(၂) (http://www.4shared.com/file/ioKcsrZq/14Bladesgfpfnkkqabccavi.html) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.4shared.com/file/ScYnVegi/14Bladesgfpfnkkqabccavi.html) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.4shared.com/file/FWbxiLxo/14Bladesgfpfnkkqabccavi.html) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.4shared.com/file/QeZJOYAM/14Bladesgfpfnkkqabccavi.html) ။
ERASER ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
He will erase your past to protect your future လို့ ဆိုထားလေရဲ့ ...
မင်းသား အားနိုး ရဲ့ အက်ရှင်ရုပ်ရှင်ကားလေးပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.4shared.com/file/8ZPW_HnC/EkoRebtAqbtuyvySERavi.html)၊ အပိုင်း(၂) (http://www.4shared.com/file/j2etWiwi/EkoRebtAqbtuyvySERavi.html) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.4shared.com/file/oIZtBugd/EkoRebtAqbtuyvySERavi.html) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.4shared.com/file/ydHLZZk5/EkoRebtAqbtuyvySERavi.html) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.4shared.com/file/NbajJRd1/EkoRebtAqbtuyvySERavi.html) ။
BLUE STREAK ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ အက်ရှင် ဟာသကားလေးပါ။ မကြည့်ရသေးရင်တော့ .... ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ ....
blue diamond နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ သူခိုးကနေ ရဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ဟာသဇါတ်လမ်းလေးပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.4shared.com/file/BUgXqHDq/BoLnUlEqgykadskhDIAavi.html)၊ အပိုင်း(၂) (http://www.4shared.com/file/qSPoa6uC/BoLnUlEqgykadskhDIAavi.html) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.4shared.com/file/D89qeFvT/BoLnUlEqgykadskhDIAavi.html) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.4shared.com/file/BR2-p9aq/BoLnUlEqgykadskhDIAavi.html) ။
Looney Tunes Back IN Action ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
ကာတွန်းနဲ့ လူတွေနဲ့တွဲပြီးရိုက်ကူးထားတာတဲ့ ခလေးကြိုက်ကားလေးပါ။ ကာတွန်းကားတွေကို ကြိုက်တတ်တဲ့လူကြီးတွေလဲ ကြိုက်ကြမှာပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.4shared.com/file/RbEb5IEQ/LOONEYTUNESBackInActionnxphart.html)၊ အပိုင်း(၂) (http://www.4shared.com/file/TtjHTDwx/LOONEYTUNESBackInActionnxphart.html) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.4shared.com/file/MnK-C0nd/LOONEYTUNESBackInActionnxphart.html) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.4shared.com/file/0uuWEqQd/LOONEYTUNESBackInActionnxphart.html) ။
Hot Shots ! ကားလေး ပြန်တင်ပေးပါအုန်း ..
ညီ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး ပြန်ဆက်တာ အကုန်မပါလို့.. :?
တခြားဒေါင်းလုပ်ချပြီးသား သူတွေရော အဲ့ဒီလိုဖြစ်လား မသိဘူး ။
ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ကြည့်ပြီးသားသူများရှိရင် အခြေအနေလေး ပြောကြပါအုံး .... ။ :?
ကျနော်ဆီမှာတော့ ဇါတ်ကားကအစ အဆုံး ကြည့်လို့ရပါတယ် ။
ဇါတ်သိမ်းခန်းမှာ MR.BEAN တောင် ပါလိုက်သေးတယ် (အဲ့ဒီတုန်းက သူက နာမည် သိပ်မကြီးသေးဘူးထင်တယ်၊ နောက်ပိုင်း MR.BEAN ရယ်လို့ နာမည်ကြီးပြီး hot shots ပြန်ကြည့်ဖြစ်လို့ သတိထားမိတာ) ။
ဆောရီးပဲဗျာကိုချစ်တီး....ကျနော်ကမရမှပဲ ကွန်ပလိန်းတတ်မိတယ်.....ရရင်ကျငြိမ်နေရော.. :) ဒီကားတော့မကြည့်ချင်သေးလို့ မဒေါင်းမိသေးဘူးဗျ.... တခြားဒေါင်းလို့ရတဲ့ကားတွေအတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Street Fighter (The Legend of Chun-Li) ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားလေးပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.4shared.com/file/gNCknjyp/Street_Favi.html)၊ အပိုင်း(၂) (http://www.4shared.com/file/2eNV1Fr5/Street_Favi.html) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.4shared.com/file/oBLsApQY/Street_Favi.html) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.4shared.com/file/tnKBixmU/Street_Favi.html) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.4shared.com/file/dDRw8ell/Street_Favi.html) ။
avatar movie က fileပြန်ဆက်ရင်
အကို ပေးတဲ့ MEF နဲ့ဆက်လို့မရလို့ပါအကို
MEF ဆိုတဲ့ ပါတ်စ်ဝက်ကို ကော်ပီ ကူးထည့်တာလား။
ကော်ပီ ကူးပြီး မထည့်ပါနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါလား။
ဖိုင်ကို zip ဖြေရင် 7zip ကို သုံးဗျ တော်တော်လေး အဆင်ပြေတယ်။
ဘာဝင်းဒိုး သုံးလဲပါပြောပေးဦးနော် 7zip က ၀င်းဒိုးမတူရင် မရလို့ပါ။
အဲဒါမှ မရတော့ဘူး ဆိုရင် ကျနော် ဒေါင်းလော့လင့် အသစ်ပေးမယ်။
ပြန်ပြောပေးပါ။ ဆြာချစ်လဲ အလုပ်အားဘူးထင်တယ်။ :)
(လူတယောက်တွင် သခင်တယောက်သာ ရှိရမည်)
ကျွန်တော် FFSJ software နဲ့ပြန်ဆက် တာပါအကို
အရင်တုန်းကလဲ password တောင်:တယ်
ကျွန်တော်က တောင်:ရင် MEF ဆိုပီးရိုက်လိုက်ရင် အဆင်ပြေရော
download ကအကုန်လုံး လုပ်ပီးသွားပါပီ အကို
လုံးဝ မရတော့ဘူး ဆိုရင် အသစ် ပြန်ပြီးဒေါင်းလော့လုပ်ပါလား။
ကျနော် Mediafire လင့်တွေ အောက်မှာ ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
အဲဒါ ဆိုရင်တော့ လုံးဝ အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သူက ပါတ်စ်ဝက် မှားတယ်လို့ ပြောတာလား။
အော် ... တခုရှိတယ် ဒေါင်းလော့လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖိုဒါ အသစ်တခု ဆောက်ပြီး ပြန်ဆက်တာရော ဟုတ်ရဲ့လား။
ဖိုဒါအသစ်ဆောက်ပြီး မထည့်ပဲနဲ့ အပြင်မှာ ဒီအတိုင်း လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီပြဿနာမျိုး တက်နိုင်တယ်ဗျ။
မရဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်ဒေါင်းလော့ လင့်အသစ်ပေးမယ်။
ပြန်ဆက်ရင် ကျွန်တော်ပေးတဲ့ password ကမှားနေပါတယ်တဲ့
folder လဲအသစ် ဆောက်ပီး ဆက်လဲ အဆင်မပြေပါဘူ: ခင်ဗျာ
အိုကေ ဒါမှ မရဘူး ဆိုရင်တော့ ဒေါင်ေးလာ့ အသစ်လုပ်ရုံကလွဲပြီး ကျနော်လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါခင်ဗျာ။ :e :e :2: :2:
အကုန်လုံး Mediafire တွေချည်းပဲနော် မျက်စိ မှောက်မသွားနဲ့ဦး။
Mediafire Password : mediafiremoviez.com
ကဲ အဆင်ပြေလောက်မယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ။
@ : original uploader
အကို Chitee ကိုဝင်ပြီး အားဖြည့်ပေးလိုက် ပါဦးမယ်ဗျာ။
Credit By : Original Uploader
(လူတယောက်တွင် သခင် တယောက်သာရှိရမည်)
နမူနာလေးကြည့်လို့ရအောင် Youtube လင့်လေးဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
ကျေးဇူးပါဘဲ လေပြေလေးရေ ... :7:
ကျနော် Desktop က ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ဖွင့်လိုက်ရင် .. window ဆက်မတက်နိုင်ဖြစ်နေလို့ MEF အတွက်စုထားတဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှရှိတဲ့ စာအုပ် စာတမ်းတွေ ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ကိုဘယ်လိုမှ ၀င်ယူလို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ဗျာ ... :&#039;(
နောက်လဲ ၀င်ရောက်အားဖြည့်ပေးအုံး ... ရုပ်ရော အသံရော အကြည်လေးတွေ တင်ပေးနော် .... :applaus
The Book of Eli ရုပ်ရှင်ကားလေးပါ ။
စိတ်ချအကိုရေ ကြည်တာတော့ ဘာကြည်သလဲ မမေးနဲ့၊ :4:
နမူနာလေး ကြည့်ရအောင် ....
နမူနာလေးကြည့်ချင်သူများအတွက် youtube လင့်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတယောက်က အီးမေးနဲ့ပို့လာတဲ့ လင့်လေးပါ။ ကျနော်တောင် ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူး ။
&quot;အနှစ် (၅၀) ကျော် ရှားပါးရုပ်ရှင်လေးပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုံးက ဂျပန်စစ်သားတွေ ထွတ်ပြေးရင်နဲ့ ဗမာ့စောင်းကို သုံးခဲ့တာကို ပြတာပါ။ ဂျပန် စကားပြောပြီး အင်္ဂလိပ် စာတန်းထိုးပါတယ်။ အေ၀မ်း ဖလင်းက ကူညီရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်&quot; လို့တော့ရေးထားတာဘဲ ။
စီဒီ (၁) မှဒေါင်းလုပ်ယူရန်
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?ztnymantzm5) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?ntzozimmyzd) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?5idgkogm3m2) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?zjdzh2nymmy) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.mediafire.com/?4ggvtkyndmt) ၊ အပိုင်း(၆) (http://www.mediafire.com/?dnzbtmtyztz) ၊ အပိုင်း(၇) (http://www.mediafire.com/?zyyzdothv3z) ၊ စာတမ်းထိုး (http://www.mediafire.com/?yydlmjxrdn1) ။
http://i47.tinypic.com/29fn1k.gif &amp; http://i50.tinypic.com/2s8mddd.gif
စီဒီ (၂) မှဒေါင်းလုပ်ယူရန်
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?z25ntntwhem) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?myizwm2mbzn) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?yrmnynloe5g) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?yzd3kmmlj2y) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.mediafire.com/?1oigmhntwmm) ၊ အပိုင်း(၆) (http://ifile.it/h301gvc) ၊ အပိုင်း(၇) (http://www.mediafire.com/?xymzzge2jnw) ၊ စာတန်းထိုး (http://www.mediafire.com/?dmm32ozotmo) ။
Youtube မှာရှာကြည့်တော့ တွေ့တာနဲ့ နမူနာလေးကြည့်ရအောင် ....
File Splitter $ Joiner(FFSJ) (သို့) HJ-Split တို့နဲ့ပြန်ဆက်တဲ့နည်းကိုတော့ Software ဖြင့် ဖိုင်များခွဲခြင်း (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3311.msg42228.html#msg42228).... (ဒီလင့်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတွေပါရှိနေပါတယ်) မှာ ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။
ကွန်ဖူးရုပ်ရှင်ကားလေးပါ ။ သူငယ်ချင်းပေးတဲ့လင့်လေးကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ရုပ်ရော အသံရော ကြည်တယ်လို့တော့ ပြောတာဘဲ ၊ ကျနော်လဲ ပိတ်ရက်ကျမှ ဒေါင်းလုပ်ချကြည့်ရအုံးမယ် ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?oc2tyrmjayk) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?me5wzkj2ozw) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?ifmdlfrz34y) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?mzymfyjdwnj) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.mediafire.com/?e5wniczyedj) ၊ အပိုင်း(၆) (http://www.mediafire.com/?y2nwuo5j2kt) ၊ အပိုင်း(၇) (http://www.mediafire.com/?dwjjyyn1jg4) ၊ အပိုင်း(၈) (http://www.mediafire.com/?hdmjjjjuzw4) ၊ စာတန်းထိုး (http://www.mediafire.com/?zm3yu51jgbz) ။
ကြည့်လို့မရပါက youtube screen လေးကို double click နှိပ်ပြီး မူရင်းလင့်မှာသွားကြည့်ပါ။
Robin Hood ဇာတ်ကားလေး ရှိရင်တင်ပေးပါအုန်း ..
တစ်လက်စတည်း w-7 (64-bit)အတွက် FFJS အရင်ဆော့ဝဲလ်က အလုပ်မလုပ်ဝူး ဗျ ..
ကိုကြီးချစ်တီးကို အပူကပ်အုန်းမလို့ ပဲ ... Google မှာလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ တွေ့ တာနဲ့ ...
ဒီမှာပဲ တင်ပေးလိုက်တော့မယ် ... နောက်လူတွေ အဆင်ပြေအောင်လို့..
ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6837.msg53151.html#msg53151).... kosithuag တင်ပေးထားပါတယ် ... ကြည့်ချင်ရင် သွားဆွဲလိုက်နော် ..... :7:
ဒါပေမယ့် ... CAM Version လေးဘဲဖြစ်နေသေးတယ် ....
ကျနော်ရှာကြည့်တော့လဲ အကြည်လေးမတွေ့သေးလို့ ... မတင်ပေးသေးဘူးနော် ....
CAM Version တွေဘဲတွေ့သေးတယ် .....
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းလို့ လျှို့ဝှက်လက်နက်ဆန်းတွေသုံးတဲ့ အက်ရှင်ဟာသ ဇါတ်ကားလေးပါ။ ကြည့်လို့ကောင်းတယ် ၊ ကြိုက်ကြမှာပါ ။
ဒေါင်းလုပ်လင့်လေး ရခဲ့လို့ပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://mediafiremoviez.com/gtsmbrif1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://mediafiremoviez.com/gtsmbrif2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://mediafiremoviez.com/gtsmbrif3) ၊ အပိုင်း(၄) (http://mediafiremoviez.com/gtsmbrif4)
Youtube မှာ နမူနာလေးကြည့်ရန် ....
File Splitter $ Joiner(FFSJ) (သို့) HJ-Split တို့နဲ့ပြန်ဆက်တဲ့နည်းကိုတော့ Software ဖြင့် ဖိုင်များခွဲခြင်း (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3311.msg42228.html#msg42228).... (ဒီလင့်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတွေပါရှိနေပါတယ်) မှာ ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။
w-7 (64-bit) အတွက် FFJS အရင်ဆော့ဝဲလ်က အလုပ်မလုပ်ပါက .... FFJS (http://ifile.it/eiouxkh) မှယူပါ ။
[quote author=phoeko link=topic=6145.msg42060#msg42060 date=1262499248]
download လုပ်လိုက်တော့ .vnw ဖုိုင်တွေဖြစ်နေတယ်။ HJ splitter နဲ့ရော FFSJ နဲ့ပါစမ်းပြီးပြီ မရဘူး။ အဲဒီဟာတွေက .001 (သို့) ._a လို file extension မျိုးကိုတောင်းတာကိုး။ ကျွန်တော်ရှာသိရသလောက်တော့ vnw jointer ဆိုတာသက်သက်ရှိပုံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ download လုပ်လို့မရသေးဘူး။ အကိုတို့မှာ ရှိရင်မျှပါခင်ဗျာ။
အကိုရေ နောက် ကနေ.. ဖိုင် extension ကို .rar ပြောင်းပြီးဖြေကြည့်ပါလား ခင်ဗျ ..
တစ်ကယ်တော့ .vnw ဖိုင်တွေဟာ၊ .rar ဖိုင်တွေပါပဲ၊ .vnw နေရာမှာ Rename နဲ့ .rar လို့ ပြောင်းလိုက်ရင် rar ဖိုင်တွေကို ဖြည်တဲ့အတိုင်း ဖြည်လို့ ရသွားပါလိမ့်မယ်၊
IronMan2ရှိရင် တင်ပေးပါလား။ကြည်ချင်လို့ပါ။နောက်ပြီး 4shared မှာ တင်တဲဖိုင်တွေကို ကိုယ် 4shred အကောင့်ထဲကိုထည်ချင်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲ ။ကူညီပါဦး fri ။ ကျေးဇူး ......
လောလောဆယ်တော့ CAM Version ပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။
(password : 300mbfilms.com)
TS Ver-2 400mb
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/file/ipmnpvgm0dl/IM2.2010.TS.V2_300mbfilms.com.mkv.001) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/file/9yz1z5lvtg7/IM2.2010.TS.V2_300mbfilms.com.mkv.002) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/file/qnjmdlgjktw/IM2.2010.TS.V2_300mbfilms.com.mkv.003) ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/download.php?lmm5wh9y2r4) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/download.php?9imy3mt5wym) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/download.php?wbz5vm2y4cy) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/download.php?mew0snwz4tm) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.mediafire.com/download.php?o2jwvhbywdj) ၊ အပိုင်း(၆) (http://www.mediafire.com/download.php?h42hwm4myjw) ၊ အပိုင်း(၇) (http://www.mediafire.com/download.php?wydb4thtzyd) ။
(password : np90.blogspot.com)
လင့်အသစ်နဲ့ နမူနာ youtube ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ် ။ chit tee
ခုလိုတင်ပေးတဲအတွက် ကျေးဇူးပဲ။ နောက်လဲ လိုတာရှိရင်တောင်းမယ်နော် ။ခုတောဒေါင်းလိုက်ဦးမယ်။ ကွန်မကောင်းတော့ တော်တော်ဒေါင်းရမှာ။
A-Team movie လေးရှိရင် တင်ပေ:ပါအုန်း ခင်ဗျာ
ယူတာတွေကြီ: ဖစ်နေလို့ အားနာလာလို့ ရှိတာလေ:ပေးချင်လို့
အကိုလို အများကြီ:မပေးနိုင်လို့ ရှိတာလေ:ပေ:ပါရစေ
ဒီမှာပဲ ပေးမယ်နော်(စိတ်ဆိုးရဘူးနော်) :4: :4: :4: :4:
Movie Title ..........Serenity တဲ့
Download Links ကဒီမှာနော်
အပိုင်း (၁) (http://bit.ly/srntybrmf1) ၊ အပိုင်း (၂) (http://bit.ly/srntybrmf2) ၊ အပိုင်း (၃) (http://bit.ly/srntybrmf3) ၊ အပိုင်း (၄) (http://bit.ly/srntybrmf4) ။
အပိုင်း (၁) (http://bit.ly/srntybrif1) ၊ အပိုင်း (၂) (http://bit.ly/srntybrif2) ၊ အပိုင်း (၃) (http://bit.ly/srntybrif3) ၊ အပိုင်း (၄) (http://bit.ly/srntybrif4) ။
Mediafire Password ကဒီမှာနော်
အခုလိုအားဖြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးပါဘဲဗျာ .. ကို waiyanminnaing ရေ ....
(နဲနဲ ၀င် edit လုပ်ထားတယ် .... ပုံအကြီးထည့်ပေးခြင်း ၊ ကျနော့် format နဲ့တူသွားအောင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း ၊ youtube နမူနာထည့်ပေးခြင်း)
ကို neonlm ရေ ...
2012 ရုပ်ရှင် မူလလင့် (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg42060.html#msg42060)မှာ ဒေါင်းလုပ်လင့်အသစ် နဲ့လဲ ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ် ။
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။ တကယ်တမ်းက ကျနော် အရင်ဒေါင်းလုပ်ချပြီး မှာ ကိုယ့်ရဲ့ 4shared Account ထဲမှာ ပြန်တင်ပေးချင်တာပါ ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေက expire ဖြစ်မှာ မပူရတော့ဘူးပေါ့ ။ ကျနော့် desktop က ဖွင့်လို့မရသေးလို့ တန်းပြီးတော့ဘဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ်လေးတွေ တင်ပေးနေဖြစ်တယ် ။
ဒီကားလေးက ခလေးကားလေးပေမယ့် ကျနော်လဲကြိုက်တဲ့ကားလေးပါ။ Animation ကားတွန်းလေးတွေ စပေါ်ခါစလောက်က ကားလေးပေါ့။ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?wgzjyh4jy2i) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?jzqjmezk3jz) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?zdjcz5wn1z0) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?zjnzn2lzbzy) ။
ပတ်စ်ဝက်တောင်းခဲ့ရင် ... mediafire-moviez.co.cc
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။ နမူနာဘဲ ကြည့်ဖူးသေးတယ် ။ ကောင်းတဲ့ကားလေးတကားပါဘဲ ။
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/aiwbrv2if1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/aiwbrv2if2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/aiwbrv2if3) ၊ အပိုင်း(၄) (http://ifile.it/a8ezfw2) ။
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။
အပိုင်း(၁) (http://mediafiremoviez.com/asbybrif1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://mediafiremoviez.com/asbybrif2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://mediafiremoviez.com/asbybrif3) ၊ အပိုင်း(၄) (http://mediafiremoviez.com/asbybrif4) ။
ကွန်ပျူတာ ဟက်ကာ သမားတွေ ဘယ်လောက်စွမ်းမယ် ဆိုတာ တွေ့ရမယ် အက်ရှင်ဇါတ်ကြမ်း ကားလေးပါ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?45dqndnpnvy) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?mciwosyd5y0) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?ttjmlm0mdnh) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?d6jammnk2tx) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.mediafire.com/?wzmn9mm0tbn) ၊ အပိုင်း(၆) (http://www.mediafire.com/?tim5pcdjzb3) ။
rar ပတ်စ်ဝက်လေးကတော့ ... ultrascorp
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ကားလေးတကားပါဘဲ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?addnw5ilhug) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?dmzddztmnjj) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?kkyxnowntwz) ။
ပတ်စ်ဝက်တောင်းရင်တော့ ထည့်ရန် - mediafiremoviez.com
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။ မင်းသား နီကိုလပ်စ်ကေ့ခ် ရဲ့နာမည်ကြီးကားလေး တကားပါ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?zmjlzflmdwy) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?nn3izimtx4z) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?4rmmomyzzjy) ။
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။ ဟောင်းနေပေမယ့် ကောင်းနေဆဲ ကားလေးတကားပါဘဲ ။ အူတက်အောင် ရယ်ချင်ရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ပေါ့ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?4oq2jzzvgjz) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?gczqy5nihmi) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?bnoh4zy0f2z) ။
ပတ်စ်ဝက်တောင်းခဲ့ရင် ... mediafiremoviez.com
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?jt4neyo0ezt) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?muyhngo1b3w) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?gmwjm2oym5z) ။
05-28-2010, 02:09 PM
အပိုင်း(၁) (http://mediafiremoviez.com/kkbrif1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://mediafiremoviez.com/kkbrif2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://mediafiremoviez.com/kkbrif3) ၊ အပိုင်း(၄) (http://mediafiremoviez.com/kkbrif4) ၊ အပိုင်(၅) (http://mediafiremoviez.com/kkbrif5) ။
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။ ဒီကားလေးကို ရှာနေတာ ကြာပြီ ... အခုမှတွေ့လို့ ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?rzzizjwwnwg) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?umz5gynnkqy) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?1rqq45zjyjn) ။
စာတမ်းထိုး ယူရန် (http://www.mediafire.com/?wma4dfimigg)
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။ ကြည့်လို့ကောင်းတယ် ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?tfzj1m12jtu) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?ttyzgdmozwb) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?zzzmy4ytmuj) ။
လင့်လေးထပ်ရပြန်လို့ ... ။ ဒါလေးက ရုပ်ရှင်တော့ မဟုတ်ဘူး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ရဲ့ MTV လေးပါ ။ ဒီမှာဘဲတင်လိုက်တော့မယ် ။
အပိုင်း(၁) (http://ifile.it/yvflsom/This.is.it.2009.DVDRip_mediafiremoviez.com.mkv.001) ၊ အပိုင်း(၂) (http://ifile.it/7zsemfi/This.is.it.2009.DVDRip_mediafiremoviez.com.mkv.002) ၊ အပိုင်း(၃) (http://ifile.it/ozgdjf3/This.is.it.2009.DVDRip_mediafiremoviez.com.mkv.003) ။
အကိုရေ .. Home Alone 1990 က လင့်သေနေပါတယ်အကို ... အကိုအားရင် ပြန်တင်ပေးပါဦးအကို ။
မူရင်းလင့် (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg53646.html#msg53646)မှာပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ် ညီလေးရေ .... :7:
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?t4yiqjny425) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?m4mjgi2jj52) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?nwei5onzzfg) ။
ပတ်စ်ဝက်တောင်းပါက .. mediafiremoviez.com
အကိုတို့ရေ လုပ်ကြပါဦးဗျာ။ ကူညီကြပါဦး။ LOSERS ဆိုတဲ့ အခွေကို ၃ ပိုဒ်လုံး ကူးပြီးပြီး။ FFSJ နဲ့ဆက်တာလဲအဆင်ပြေတယ်။ ကြည့်မှဘဲ ၂မိနစ်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်ဗျ။ ထပ်ဖွင့်လည်းဒီလိုဘဲ ၂မိနစ်ဘဲလာတယ်။ ဘယ်လိုဖွင့်ကြည့်ရလဲကူညီပါဦး။ ကျွန်တော်သုံးတဲ့ Player က VLC Player ပါ။
မရိုးနိုင်တဲ့ ကားလေး ဖြစ်နေလို့ရှာပြီး ပြန်တင်ထားပါတယ် ။
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?z21mnnnzqww) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?4m1zjmwzmzy) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?iydnyj4xjyy) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?gwyijnommmm) ။
Twilight (2008) BRrip
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?zntkwm1lmht) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?mmxgannhzww) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?tzqmzyznxza) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?jlnzmzoym0w) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.mediafire.com/?gjzwdojyjwn) ၊ အပိုင်း(၆) (http://www.mediafire.com/?fjmzj2zizni) ။
အခုလို ဝင်ပီးedit လုပ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကိုလို မလုပ်တက် လို့ မလုပ်လိုက်တာပါ :? :? :? :? :? :?
ပုံအကြီး ဘယ်လိုထည့်လဲ youtube နမူနာဘယ်လိုထည့် လဲ သင်ပေးပါလာဗျာ
နောက်တခါ လုပ်ရင် အကိုformat နဲ့ တုအောင် လုပ်လို့ရအောင်လို့ပါ
ဒီနေရာလေးမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,887.msg41059.html#msg41059) ရှိတဲ့ ကျနော်ရေးထားတဲ့ပို့စ် အပါအ၀င် တခြားသူတွေအားလုံး ၀င်ဆွေးနွေးထားကြတာတွေအားလုံးကို သေချာ ဖတ်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ ။
အဲ့ဒါဆိုရင် ညီလေး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
Youtube နမူထည့်ပုံကလဲ ဘာမှမခက်ပါဘူး ။
http://www.youtube.com/ ထဲမှာ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ ရုပ်ရှင် နာမည်ထည့်ရိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက် ....
ဥပမာ ... Kung Fu Hustle trailer
အဲ့ဒါဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာတွေ အများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ် ။ အဲ့ဒီထဲကမှ တခုချင်းစီလိုက်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေမယ့် တခုခုရဲ့ အပေါ်က address bar မှာပေါ်နေမယ့်လင့်လေးကို ကူးယူပြီးတော့ ...
05-29-2010, 01:30 PM
ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် .... (မြန်မြန်ယူလိုက်နော် ifile မှာက သိပ်မခံလို့)
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/rbhdtsif1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/rbhdtsif2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/rbhdtsif3) ။ (TS 350mb)
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/file/b4dmt3od9ot/Rh.ts_300mbfilms.com.mkv.001) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/file/3d9wzekgtde/Rh.ts_300mbfilms.com.mkv.002) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/file/jgox5tmxtdn/Rh.ts_300mbfilms.com.mkv.003) ။ (TS 350mb)
mediafire ရဲ့ပတ်စ်ဝက်ကတော့ - 300mbfilms.com
05-29-2010, 03:11 PM
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/file/xcw59ibm92b/Go.In.Six.Seconds.2000.720p_300mbfilms.com.mkv.001) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/file/3c1oz5kebze/Go.In.Six.Seconds.2000.720p_300mbfilms.com.mkv.002) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/file/zb9t3nqlzy9/Go.In.Six.Seconds.2000.720p_300mbfilms.com.mkv.003) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/file/5btafwgjd1t/Go.In.Six.Seconds.2000.720p_300mbfilms.com.mkv.004) ။ (Brrip 720p 550MB)
အကိုချစ်သီးရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ ...။
ကျနော် ရှေ့တပါတ်အားရင် ၀င်ပြီး အားဖြည့်ပေးပါ့မယ်။ :) :)
လောလောဆယ်တော့ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါ။ .....
ရှေ့တပါတ်အားတာနဲ့ ဖိုရမ်ကို ပုံမှန် ပြန်ဝင်ဖြစ်မှာမို့လို့ပါ ...။
ကျနော် အပေါ်မှာ ပြောသာပြောတားတယ် မတင်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေလို့ ..။ M;
တကယ်မအားသေးလို့ပါ အကိုေ၇ ... အကိုတင်ထားတာလေးတွေ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ကျနော်လောလောဆယ် တွမ်ခရုစ်ကား ကြည်နေ့တယ်။
နာဇီကားလေး ... ကြည့်ပြီးသားကြီးပါ .. ဒါပေမယ့် ကြိုက်လို့ အားရင် ပြန်ကြည့်မလို့ ဒေါင်းလော့လုပ်နေတယ် ...။
အကိုအားရင် Tear Of The Sun ဇာတ်ကားလေးရှာတွေ့ရင် တင်ပေးထားပါဦးအကို။
ဘရုစ်ဝီလီကားပါ။ ကြည့်ပြီးသားပဲ ဒါပေမယ့် အခွေပျောက်သွားလို့ ..
Pince of Persia:The sands of time(2010)
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/poptsmf1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/poptsmf2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/poptsmf3) ။
mediafire ရဲ့ပတ်စ်ဝက်ကတော့ ---mediafiremoviez.com
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/poptsif1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/poptsif2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/poptsif3) ။
အကိုချစ်တီး အခုလိုပြောပြလို့ ကျေ:ဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
တော်တော်လုပ်ကြည့် လိုက်ရတယ် လုပ်လို့ရသွားတော့လဲ ပျော်တယ်ဗျာ
နဲနဲလေး ၀င်ပြင်ပေးထားတယ် ။ chit tee
Iron Man2ကဒေါင်းပြီးဖိုင်ဖြည်တော့ဒီ error တက်နေတယ်။ အဲဒါဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး ။ကူပါဦး။စားရခါနီးမှပြုတ်ကြသွားသလိုလဲပဲ။
! C:\_Documents and Settings\_Kyaw\_My Documents\_Downloads\_movie\_27.05.10\_IM2-Eng_300mbfilms.com.part2.rar: Packed data CRC failed in Iron Man2CAM X264-Team-TDK.mkv. The volume is corrupt
! C:\_Documents and Settings\_Kyaw\_My Documents\_Downloads\_movie\_27.05.10\_IM2-Eng_300mbfilms.com.part4.rar: CRC failed in Iron Man2CAM X264-Team-TDK.mkv. The file is corrupt
ကူညီပါဦး။ကူညီပါဦး။ကူညီပါဦး။တယောက်မှ ရှိကြဘူးလား ။ကြာလှပြီ။စောင့်နေတာ။
ကြည့်ရတာ အပိုင်း ၂ နဲ့ အပိုင်း ၄ က ဖိုင်မစုံလို့ဖြစ်တာ ထင်တယ်...
အဲဒီအပိုင်း ၂ ခုရဲ့ file size ကို အခြားဖိုင်တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါဦး....
irobot83 ရေ ....
ဒီနေရာကမူလပို့စ် IRON MAN2မှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg53544.html#msg53544)လင့်အသစ်ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ် ။ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ ။
ဖိုရမ်ထဲမှာတော့ လူတွေတော့ရှိကြတာပေါ့ဗျာ ... အားလုံးက ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ရှုပ်နေတတ်ကြလို့ ... ချက်ခြင်း response မဖြစ်ရင်လဲ နည်းနည်းတော့ သည်းခံခွင့်လွှတ်ပါဗျာ ။
အဆင်မပြေသေးရင်လဲ ထပ်ပြောပေါ့ ...
.com.mkv.001 ကိုဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမှာလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်မှ ကြည်လိုရမှာလဲ။.com.mkv.001 ကိုနားမလည်လို့ပါ.တချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလား။ IDM နဲကောဘယ်လိုဒေါင်းရမှာလဲ ။
.mkv.001 ဆိုတာက .mkv movie ဖိုင်းကို HJ-Split နဲ့ခွဲထားတာပါ... အသုံးပြုပုံကို ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3311.msg42228.html#msg42228)... IDM နဲ့ဘာကိုဒေါင်းချင်တာလဲ...
အကိုရေ သိတာလေ:ပြောပြ မယ်နော် မဟုတ်ဘူ:ဆိုရင်လဲ sorry ပါဗျာ
.com.mkv.001 ကိုပြန်ဆက်ချင်ရင်ဒီနေရာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3311.msg42228.html#msg42228/)မှာသွားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ ဘယ်လုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်
Die Hard 4.0:Live Free Or Die Hard(2007)
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/file/hlgwcl9zvgz/L.Ct.T.R.t.c.o.le2003.720p_300mbfilms.com.mkv.001) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/file/tjmtizgusyz/L.Ct.T.R.t.c.o.le2003.720p_300mbfilms.com.mkv.002) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/file/ctaih0m4vyt/L.Ct.T.R.t.c.o.le2003.720p_300mbfilms.com.mkv.003) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/file/rztnmfjfygg/L.Ct.T.R.t.c.o.le2003.720p_300mbfilms.com.mkv.004) ။ (Brrip 500MB)
Kung Fu Hustle မင်းသားပါဝင်သော ... (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg40726.html#msg40726) ပါဝါတွေနဲ့ ကွန်ဖူးကားကြိုက်သူများအတွက် ကွန်ဖူးပါဝါနဲ့ဘောလုံးကန်တဲ့ကားလေး ... အပျင်းပြေ ဟာသကားလေးပေါ့ .... ကြည့်လို့လဲကောင်းတယ် ။
အပိုင်း(၁) (http://mediafiremoviez.com/shlnsccrbrmf1) ၊ အပိုင်း(၂) (http://mediafiremoviez.com/shlnsccrbrmf2) ၊ အပိုင်း(၃) (http://mediafiremoviez.com/shlnsccrbrmf3) ၊ အပိုင်း(၄) (http://mediafiremoviez.com/shlnsccrbrmf4) ။ (BRRip 550mb)
mediafire ရဲ့ပတ်စ်ဝက်ကတော့ - mediafiremoviez.com
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/anestsmfr1/)၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/anestsmfr2/)၊အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/anestsmfr3/)
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/anestsif1/)၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/anestsif2/) ၊ အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/anestsif3/)
Ice Age3(2009) ရဲ့ mediafire link ကသေနေတာလား မသီဘူး။တချက်လောက် ဎြန်စစ်ပေးပါဦးနော်။
ဒီနေရာလေးက Ice Age3(2009) မူရင်းလင့် (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,6145.msg53649.html#msg53649) မှာပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ် ။ ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံး ကို irobot83 ရေ ..... :7:
ကိုလဲယူတာများနေလားမသိဘူး။အဲဒါနဲ ကိုယ်ကိုကို ရှက်လာလို့(ဒီရုပ်ကြီးက) မရှိရှိအောင်ရှာပြီး ဇတ်ကားတကားတင်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုလဲမကြည့်ရသေးဘူးး။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောကြနော် ။လိုတာရှိရင်လဲပြင်ပေကြပါဦး ။
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.647
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?nx2w31xm7zw) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?bng2lxlqhmx) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?yzfdi12ee1i) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?mcgyg5ozvv4) ၊ အပိုင်း(၅) (http://www.mediafire.com/?nx2w31xm7zw) ။
ပတ်စ်ဝက် (for 3Rd part only): urgrove.com
နဲနဲဝင်ပြင်ပေးထားပါတယ် ။ chit tee
ကျေးဇူးပါအကိုကြီးရေ .... :4: (ကျနော်ကအတော်နုနေလို့လားမသိ ... :2:)
အဆင်ပြေသလိုအားဖြည့်တင်ပေးပေါ့ ... အဆင်မပြေရင် အားတဲ့အချိန်ကျ ကြည့်ကျပ်ပြင်ပေးပါ့မယ် ....
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/fpwlbrmf1/) ၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/fpwlbrmf2/) ၊ အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/fpwlbrmf3/)
Mediafire Password .........................mediafiremoviez.com
အပိုင်း(၁) (http://bit.ly/fpwlbrif1/) ၊ အပိုင်း(၂) (http://bit.ly/fpwlbrif2/) ၊ အပိုင်း(၃) (http://bit.ly/fpwlbrif3/)
အပိုင်း(၁) (http://www.mediafire.com/?ryxq525mzdy) ၊ အပိုင်း(၂) (http://www.mediafire.com/?mtftn4aqytm) ၊ အပိုင်း(၃) (http://www.mediafire.com/?zgmtyyygnym) ၊ အပိုင်း(၄) (http://www.mediafire.com/?tmyfdz0ug3i) ။ (BRrip 400mb)
mediafire ရဲ့ပတ်စ်ဝက်ကတော့ - mediafire-moviez.co.cc
hi all fri
4shared desktop v.3.2.1 အသစ်ထွက်နေပြီ အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်ဒေါင်းလိုက်ပါဦး။
အပိုင်း ၅ လင့် က အပိုင်း ၁ လင့်နဲ့သွားတူနေတယ်ဗျို့။ အပိုင်း ၁ကိုဘဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတယ်။
အကို ရေ တကယ့် ဖိုင်လင့် က လေး ခု ပါပဲ အားလုံး ဒေါင်းပြီးပြီ ဆို ဖြည် ကြည့်လို့ရပါပြီ
Page Not Found တဲ့။
ကျန်တဲ့ အဲ့ဆိုက်က မူဗီ တော်တော်များများလဲ အဲ့လိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။
06-10-2010, 10:55 AM
နန်ယန်း ရေ... အောက်မှာ ထပ်တင်ပေးထားတယ်..ဖိုင်းယားလင့်နဲ့ပဲ
အပိုင်း၁ (http://www.mediafire.com/?xtv2izuyzzm) ၁၅၀ မက်
အပိုင်း၂ (http://www.mediafire.com/?dii1ddjoyog) ၁၄၅.၀၁ မက်
sorry fri neonlm
တကယ်တန်းက အပိုင်းက 4ပိုင်းပဲရှိတာ မှားသွားတာ အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။
အဆင်မပြေရင် ထပ်ပြောပါ ။ လင့်တွေကို လဲပြန်တင်ပေး ထားပါတယ်။
ဒီမှာတင်ထားတဲ Movie တွေက များသောအားဖြင့် www.mediafire.com မှာတင်ထားတာ များပါတယ် ။ ဟိုတလောက proxy တွေ အကုန်ပိတ်လိုက်တော့ 203.81.72.200 ကလဲ www.mediafire.com မရ ဘူး။ noproxy ကလဲအဆင်မပြောဘူး (Resume မရလို့) လေ။ ခု proxy လေးတခုတွေလို့တင်ပေးလိုက်တယ်
proxy တို့ noproxy တို့ ... 212.116.220.154 :443 စတာတွေ နားကိုမလည်လို့ နဲနဲလောက်ရှင်းပြပေးပါလား .. :7:
ကျနော်ကတော့ ကာတွန်းကားတွေ animation ကားတွေဘဲကြိုက်တာ ( ကလေးပဲဟာကို နော့ )
အခု ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကားလေးတစ်ကား တင်ပေးပါမယ် ၀ါသနာတူတွေအတွက်
င်္ Final Fantasy VII :Advent children ဆိုတဲ့ကားပါ Final fantasy ဂိမ်း စီးရိး တွေဆော့ဖူးရင်တော့ သိမှာပေါ့။ တကယ်မိုက်တာနော် အသတ်အပုတ်တွေ ပါဝါတွေပါထွက်တယ် ဟီး
ဒီလင့်မှာ ယူပါ http://www.mediafire.com/?sharekey=2641c278397f2824e7c82ed4b8f0c380c675e93df8624d12292b492bd5edc68e
ကိုချစ်သီးဘာကို ပြောတာလဲ မသိဘူးနော် proxy ဆိုတာ server ပေါ့( အဟီးငမောင် ဒါတော့နင်ပြောမှလား) ရန်ကုန်မှာဆို တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေက ပိတ်ထားတက်လို့ Proxy change ( IP နံပါတ်လေးတွေ ) ပြောင်းပေးပြီး တခြား server တစ်ခုကနေလှမ်းချိတ်တာပေါ့။ no proxy ဆိုတာကတော့ တိုက်ရိုက်ဝင်တာကိုပြောတာပါ။
proxy ပြောင်းရင်တော့ mozila tool bar ပေါ်က tool - option - advanced - setting အဲဒီထဲက manual proxy configuration ကိုရွေး
ပြီးတော့ Http porxy ဆိုတဲ့ Box ထဲကို 212.116.220.154 အဲဒါရိုက်ထည့် Port ထဲကို 443 ရိုက်ထည့် ပြီးပြောင်းတာ၊ ၇န်ကုန်မှာ ဆိုတစ်ချို့ဆိုဒ်တေ Blog တွေကိ proxy အမျိုးမျိုးနဲ့ကျော်ဖွင့်ရပါတယ်..IP number တွေကတော့ အများကြိးရှိတာပေါ့ နော့ သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ။ ကျတော်က အကိုပေးထားတဲ့ ဟာကို ဥပမာပြလိုက်တာပါ။
utrsoft (စာလုံးပေါင်းသည်းခံရန် )ကနေကျော်ဝင်ရင်လည်း၇တယ်ဗျ။
အဲဒါကိုမေးတာလား မသိဘူနော် ဟီး ( အမှားပါရင်ဆောရီးပါ အကို မေးတာနဲ့ ဖြေတာလွှဲနေမှာဆိုးလို့)
4shared မှ ဒေါင်းလုပ်အမြန်ချသော free software ... Latest Version လေးပါ။
ဒီတစ်ခါ How to train yout dragon ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ 3D animation ကားလေးပါ။
ချာတိတ်လေးရဲ့ အဖေ ကနဂါးတွေကို သတ်နေတဲ့ လူမျိုးစု တစ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့။ အဲဒီကလေး ကရှားပါးမျိုးနွယ် နဂါးတစ်ကောင်နဲ့ သံယောဇဉ်ဖြစ်
နောက်ဘာညာဘာညာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ တအားကြိုက်တယ် ဒီကားကို...
့hjsplit နဲ့ဆက်ပေးရမယ်နော် ဒေါင်းပြီးရင် :7: :7:
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ရဲရဲတင်းတင်း နှိပ်ပါ။ (http://www.mediafire.com/?sharekey=1351900ccada9bead1014a7a667fa2b4f329af0a31fe27afa2d0568e5b24962e)
(လူတစ်ယောက်တွင် သခင်တစ်ယောက်သာ ရှိရမည်)
သားကို Hannah Montanna ဆိုတဲ့ ကားလေးရှိရင် တင်ပေးကြပါဦးနော် ..
ချစ်ချစ်ရဲ့ ကားမို့လို့ပါ .. ရှိရင် တင်ထားပေးကြပါဦးနော် ...
ဒီမှာ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်ဗျာ ..
အင်တာနက် က အရမ်းကောင်းတော့ .. Upload တင်တာ ၁ နာရီနီးပါးပဲ .. :4:
ပြန်ဆက်တာကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ ..
တပ်မှူးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို အသေးစိတ်မြင်တွေ့စေနိုင်တဲ့ ကားလေးပါ။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဒီကားတွေကြည့်ကြည့်ပြီး စစ်ပွဲတွေကို မုန်းတီးလာတော့တာပါပဲဗျာ။
အားလုံးရဲ့ ပါတ်စ်ဝက်ကတော့ lucky ပါခင်ဗျာ။
PS : အကိုချစ်တီးရေ ကျနော်တော့ တသုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်အကို။ :4: :4:
ကျေးဇူးပါဘဲ လေးပြေလေးရေ ။ ရုပ်ရှင်ကားနာမည်လေးတွေ ပိုထင်ရှားအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ နောက်ကျရင် ရုပ်ရှင်တကား ပို့စ်တခုနှုန်းနဲ့တင်ပေးနော် ။ အခုလိုကျတော့ နမူနာ youtube လေးတွေထည့်ပေးဖို့ ခက်သွားလို့ ။ chit tee
Documentation ကားတစ်ကားလို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဗဟုသုတရမယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းမယ်။
အပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်မလို့ပါပဲ ဒါပေမယ့် မေ့သွားလို့ ။။ ပိုက်ပိုက် ၂ ကျပ်ရအောင် အကြံအဖန်လုပ်တာလဲ ပါချင်ပါမှာပေါ့နော်။ :2: :2:
အကိုချစ်တီး ကျနော် တစ်ကားချင်းလိုက်တင်နေရင် ပိုက်ပိုက်တွေ အများကြီးရလာမယ်နော်။ &gt;:( &gt;:(
အနော် တစ်နေ့တည်းကို အများကြီး တင်ပစ်လိုက်မယ်နော်။ &gt;:( &gt;:(
ကျနော်ကြိုက်တဲ့ကားတွေ တစ်ပုံကြီးပဲ ...။ :4: :4:
ပါတ်စ်ဝက် ရှိလား/ မရှိလား မသိတော့ပါ။ ရှိရင် lucky ကိုပဲသုံးလိုက်ပါ။ :e
လောလောဆယ် ကျနော် အကြည့်များနေတာကတော့ History တွေနဲ့ Documentary တွေပါ။
ဒီကားကတော့ အားလုံးသိပြီးသား အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါပဲ။
ဂျက်ကီချန်းရဲ့ ကားအသစ်လေးပါ။ ကျနော် လက်ရှိကြည့်နေပါသည်။ တော်တော်လေး မိုက်ပါတယ်။
မျှော်လင့်နေတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ရှာတွေ့ပါပြီခင်ဗျာ။
တော်တော်လေး လိုက်ရှာလိုက်ရတယ် အခုတွေ့တာနဲ့ ကျနော် ဒေါင်းလော့အရင်ဆွဲကြည့်ပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် ဒီကားလေးက ကမ္ဘာမှာ နံပါတ်(၁) ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်နေပါတယ်။
REF : Original Uploader
ကျေးဇူးဘဲ ညီလေး လေပြေရေ ... :-*
ပတ်စ်ဝက်ပါတယ်လဲ ပြောသေးတယ် ... ပေးလဲမပေးဘူး ... မနောက်ရဘူးနော် တုတ်ကြီးကြီးနဲ့အရိုက်ခံရမယ် ... :haha:
အကိုရေ အပေါ်မှာ ပြန်ပြင်ပေးထားလိုက်ပြီ။ :4: :4:
ကျနော် နည်းနည်း ဝေတေတေဖြစ်သွားလို့ ... :O :O (အိပ်ရေးပျက်လို့ဝေခြင်းပါ) :2: :2:
PS : ကိုငမောင်ရေ သဘောပေါက်တယ်နော် ... &gt;:( &gt;:( ဘာမှမပြောဘူး သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်နော် ... :-* :-*
တော်တော်များများ ကြည့်ပြီးကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ အခုမှကြည့်မှာပါ။ :) :)
ဟက်ကာဖြစ်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုနဲ့ ဟက်ကာလောကကြီးရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပြထားတဲ့ ကားလေးပါ။
Assassin&#039;s Creed: Lineage (2009)
ဒီဂိမ်းဆော့ဖူးတဲ့သူတိုင်း ဒီဇာတ်ကားကို သိကြမှာပါ။
ကောင်းတယ်၊ ရှယ်ကောင်းတယ်။ :4: :4:
Assassins.avi.010 က password တောင်းနေတယ် ဘာလဲပြောပြပေးပါဦး။
ကို irobot83 ရေ.. Password က joinmovie.com ပါ။ ကိုလေပြေလေး လည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ လင့်ခ်တွေရဲ့အောက်ဆုံးမှာပါ။
Redsands ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်း အပိုင်း၈ကို ပြန်တင်ပေးပါလား။ လင့်ခ်က error ဖြစ်နေပြီ။
09-24-2010, 09:49 AM
John McClane is forced to battle mercenaries who seize control of an airport’s communications and threaten to cause plane crashes if their demands are not met.
12 years after after John McClane stopped Simon Gruber, he’s back withaproblem which is going to be more difficult and personal than ever before. An organization of Internet-based terrorist led by Thomas Gabriel. They are taking control of everything in America from their computers and slowly taking over the country. Accompanied by Matthew Farrell, one of the hackers who accidentally assisted the villains in setting up the system, McClane must both find Gabriel and help prevent him from taking over America completely. Gabriel knows McClane’s on his way, and will make it as personal as possible, which means involving McClane’s daughter, Lucy.
More info : http://www.imdb.com/title/tt0386064/
အရမ်းကြိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကြည့်ပြီးရင် ရင်ထဲကျန်စေမဲ့ကားလို့ အာမခံပါတယ်။
အရည်အသွေးကောင်းကောင်းလေး ဖိုင်ဆ်ိုက် 1.4 GB လောက်ရှိပါတယ်။
Hosting Server ပေါ်တင်ပေးထားလို့ ဒေါင်းလုပ် resume လဲ ရပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ၂၀၀၅ လောက်ကကြည့်ဖူးတယ်
ခု ပြန်ကြည့်ချင်လို့ ဒေါင်း သွားပါတယ်
ကြည့်ပြီးရင် မျက်ရည် ကျရဦးမှာ ကြိုသိနေတယ် :(
Film about an ancient temple in the seven mischievous but serious matters for martial arts break small Lohan off the master in the master under the leadership of the “Tomb of four groups,” the story of wits.Mountain temple, retreat withamartial guise of an old monk – Hugh Hugh Masters and the Seven Lohan, Ku Hao “Hip Hop” the old monk with “many”, “to,” “Mi,” “Fat,” ” repetitious, “” pull “,” West “were named the seven small pupil, and the Heart with its unique temperament, the Shaolin martial arts to teach -” Seven Ocean Front. ” Suddenly one day, mysterious master walked out withoutatrace, leaving behind only the Seven Little Lohan guard gate. No master of discipline, little Lohan is having all the fun they, abandoned the martial arts practice. Little Lohan did not expect that their possession of the Millennium Temple treasures, outside the temple, has long been eyeing against Treasures. That is, four Indiana hacker group – gangsters Gangster nine lines long, snakes and scorpions beauty nothing in, King Kong and Frankenstein adviser thugs pattern happening. They heldatreasure map, make-up intoadesire to sneak into the temple visitors, stolen treasures. Unfortunately, their wishful thinking wrong, but little thought to face Lohan, easily able to win, did not expect Guiling Jing strange little Lohan designedaseries of “trap”, from daily prayers to use inalarge wooden fish, to stock soy peanut corn on the cob, and even the sternest Lohan Buddha, are “” helping hand extended, “play the King Kong Luohan. Indiana isawhole group of four was seven dirty eight factors, trapped in the temple can not get out. on Little Rohan that success, the success of nursing homes, the nine lines long resorted to despicable moves, kidnapped in the small Ocean “,” cc “, escaped into the cave closed off master Buddhist temple. She never thought that was picked up onagolden cock – Xiang Yu the Gold Cloth. Kim Kap nine patterns in upper body invulnerability, gradually losing seven small Lohan was hit the foot of the pit. Then they regretted not follow the teachings of the master,agood martial arts. Temple fell, the pain of stolen treasures with their senses and remorse, Seven Little Lohan Lohan again picked up the stick was knocked out in the water, put the Big Dipper’s formation, the final decisive battle imminent … …
Password : i-max.vn